Five-star resorts fly COVID positive guests home on private jet | Safety
Home » Nchedo njem na Mberede » Ebe ntụrụndụ ise na-efegharị COVID ndị ọbịa dị mma n'ụlọ na ụgbọelu nkeonwe
Ebe ntụrụndụ ise na-efegharị COVID ndị ọbịa dị mma n'ụlọ na ụgbọelu nkeonwe
Na-arịa Ọrịa. Nweta Home. Nke a bụ nkwa COVAC GLOBAL na-enye ndị na-agagharị na ndepụta na-eto eto nke ebe ntụrụndụ ise. GLOBAL tinyeziri COVID-19 nke ụlọ na-enweghị ụlọ ọgwụ na Mmemme Ndị otu Global
Ibute ọrịa COVID-19 na họtel ma ọ bụ ebe ezumike n'agbanyeghị enweghị mgbaàmà abụghị ihe kpatara ịkwụsị njem ịlaghachi n'ụlọ mgbe ezumike. Nke a bụ eziokwu, ọ bụrụ na ịnọ na ntụrụndụ izu ise.
Rallọ ọrụ Tyrall, Jade Mountain, Hermitage Bay, Cap Maison, Baoase, Chileno Bay Resort, Esperanza, Malliouhana, Bucuti & Tara, ANI, Nicuz, Secret Bay, Ahụkebe Villa, Falcone Fone, na Round Hill n'etiti ndị ọzọ ga-etinye gị na nchekwa a onwe ugboelu ụlọ ma ọ bụrụ na ị na-anwale nke oma mgbe ịnọ na a so hotel ma ọ bụ resotu.
COVAC GLOBAL, bụ ugbu a onye ndu na-eweta ọrịa mbugharị metụtara ahụike.
COVAC GLOBAL, nke mbụ ihe omume COVID-19 nke otu onye "zuru oke n'ụlọ gị mgbe ị na-eme njem na-enweghị ụlọ ọgwụ" agbakwunyela njem US nke ụlọ na ọrụ ngwaahịa ha. Nke a gbasoro mwepụta nke ọma nke COVAC GLOBAL na Ọgọstụ 2020 nke emere maka ndị njem US maka njem na mba ofesi naanị na ntiwapụ nke ọrịa a. Ugbu a otu afọ ka e mesịrị, na njem azụmahịa na oge ezumike laghachiri na radar, ndị bi na United States na-eme njem n'ụlọ karịa ihe karịrị 300 kilomita site n'ụlọ ha nwere ike iji obi ike na-eme njem ugbu a na-amara na ọ bụrụ na ha kwesịrị ibute COVID-19 mgbe ha na-eme njem na US, yana mba ọzọ , COVAC GLOBAL ga-ahazi ma kwụọ ụgwọ maka ụgbọ elu nke onwe iji weghachite ha n'obodo ha. Companylọ ọrụ ahụ bụ eziokwu na motto ya “Nara Ọrịa. Laa n'ụlọ. ”
Ọzọkwa, COVAC GLOBAL, esoro ụlọ oriri na ọ hotelsụ starụ kpakpando ise gbaa gburugburu ụwa na-enye ndị ọbịa nnabata ha. Ndepụta ahụ gụnyere ezigbo ebe ntụrụndụ dị ka:
Ebe ezumike nke Chileno Bay
Tylọ ọrụ Tyrall dị na Jamaica dịka ọmụmaatụ wepụrụ nchekasị ahụ ka ọ ghara ịtọpụ mgbe nnwale COVID-19 dị mma. Nke a bụ ihe na-atụ anya mgbe ị na-agba akwụkwọ Tyrall Club.
COVAC GLOBAL, bụ nke mbụ na naanị ihe mgbapụ nke COVID-19 nke ga-ahazi ma kwụọ ụgwọ maka njem nke onwe gị n'ụlọ ị ga-anwale ihe dị mma maka COVID-19 mgbe ị na-eme njem. COVAC GLOBALEgwuregwu ndị na-agbanwe agbanwe anaghị achọ ụlọ ọgwụ ọ bụla maka ibugharị. Ọ bụ ezie na ndị ọzọ na -epụpụ mmadụ na mkpuchi mkpuchi chọrọ ka ị banye n'ụlọ ọgwụ ma ọ bụ chọọ ka ọ dị mkpa iji weghachite gị n'ụlọ, COVAC GLOBAL ga-eme ka ị laa n'ụlọ na mbido mbụ nke COVID-19.